I-samsung isibonisa indlela yokwenza i-s2 classic kunye neebhendi zemveli zokubukela
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Isamsung isibonisa indlela yokwenza i-Gear S2 Classic ibenemigca yokubukela yemveli
Isamsung isibonisa indlela yokwenza i-Gear S2 Classic ibenemigca yokubukela yemveli
Iyafumaneka uku-odola e-US ukusukela ekuqaleni kuka-Okthobha I-Samsung kunye ne-apos; s I-Tizen-based Gear S2 Classic yenye yezona smartwatches zibiza kakhulu okwangoku kwimarike: kwi-349 yeedola, i-Gear S2 Classic ixabisa kakhulu njenge-Apple Watch (imodeli yexabiso eliphantsi yeApple onokuyifumana, kodwa ke) .
Umahluko phakathi kweGear S2 Classic kunye rhoqo Gear S2 (ebiza i- $ 299) ikakhulu inxulumene noyilo lwezixhobo. Nangona kunjalo, iGear S2 Classic inenzuzo ngaphezulu kweGear S2 yesiqhelo: inokusetyenziswa kunye neebhendi zemveli zokubukela. Ngokuchanekileyo, unokuncamathisela nayiphi na ibhendi kuyo, ukuba nje yeyama-20 mm enye.
Njengoko ubona kwividiyo yenyuselo efakwe apha ngezantsi, kulula kakhulu ukutshintsha iiwotshi zokubukela kwiGear S2 Classic (ngaloo ndlela utshintsha imeko yayo), nokuba ufuna ukusebenzisa ibhendi evela kubukeleyo.
Ucinga ntoni nge-Samsung Gear S2 Classic? Ngaba uyayikhetha ngaphezu kweGear S2 yesiqhelo? Jonga eyethu IGear S2 Classic vs iposi yeGear S2 ukuba awuqinisekanga okwangoku.
lg stylo 4 ubomi bebhetri
I-HTC One A9 vs Apple iPhone 6s vs Samsung Galaxy S6: ukuthelekiswa kwe-specs
I-Verizon & apos; Moto Z Droid kunye neMoto Z Force Droid bafumana incasa yale creme igcwalise iOreo cookie ekugqibeleni
Ngaba i-Surface Pro 7 ingcono kune-Apple & apos; s MacBook Pro? Ngokuqinisekileyo uMicrosoft ucinga njalo
Ukuqala ngomso, uthotho lwePixel 2 luphulukana nenkxaso yenqaku eliphambili lokufota
Uphononongo lweVerizon Network Extender
Eyonaapps ilungileyo yokwenza ipasipoti ekhawulezileyo, iifoto kunye nezazisi kwixabiso eliphantsi